Ahoana ny fomba hamaritana ny isa azo avy amin'ny backlinks?
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny lohahevitry ny kalitaon'ny rohy. Hiresaka momba ny fomba fijerin'i Google ny kalitaon'ny rohy atsy ho atsy sy ny fomba ahafahanao mandre ny kalitaon'ny rohy amin'ny fanentanana fananganana rohy. Ireo singa manatsara ny fikarohana ireo dia fototry ny fananganana rohy momba ny fifandraisana - mobile app developers. Maro ny tombony azo avy amin'ny fanatsarana ny sira mifandraika amin'ny kalitaon'ny tranokala. Voalohany indrindra, ianao dia hanangana ny marika eo amin'ny tsenanao sy ny Internet amin'ny ankapobeny. Ankoatra izany, ny backlinks dofollow dia manana saka fifandraisana amin'ny tranokalanao. Raha avy amin'ny loharanom-baovaon'ny lohamilina avo lenta izy ireo, dia afaka manangana ny pejin'ny tranonkala web ary manintona mpanjifa vaovao.
Zava-dehibe ny mahafantatra ny kalitaon'ny rohy izay manondro ny tranonkalanao satria ireo rindran-damina ireo dia manatsara ny toeran'ny sangan'asa ary afaka manatsara ny laharan'ny sehatra amin'ny pejy finday na manimba ny ezaka SEO anao. Amin'izao androntsika izao, tsy toy izany avokoa ny backlinks rehetra. Maro ireo mpitsikilo sy mpitsikilo izay manandrana milalao fikarohana lalao ary mahazo rohy amin'ny fomba samihafa. Raha tokony hoe manisa ny isan'ireo rantsana ivelany manondro pejy iray, Google dia manombatombana ihany koa ny kalitaon'ny rohy miditra. Raha ny marina, ny Google dia manankery ny fahefana, ny maha-zava-dehibe, ny toerana, ary ny loharanon'ny rohy rehetra izay manondro ny tranokalanao.
Izany no antony tokony handinihanao amim-pitandremana ny fananana fifandraisana amin'ny rohy satria ny ratra ratsy dia mety handratra ny lazanao ho marika ary hampisy lozam-pifamoivoizana. Google dia manameloka ireo loharanom-baovao izay manitsakitsaka ny toro-làlana webmaster amin'ny hatsaràny, ny rohy spammy. Izany no antony nahitanao raha toa ianao ka nahatsikaritra lahatsary tsy dia tsara loatra izay manondro ny tranokalanao, tokony hampiasa ny fitaovana Google Disavow ianao mba tsy hahitana azy ireo ho an'ny botsikilovana sy mpampiasa.
Andeha isika handinika fomba sasany ampiasain'i Google hamaritana ny isa momba ny backlinks.
Aspects izay raisina an-tànana amin'ny Google raha mamaritra ny isa amin'ny backlinks.
Ny fahefam-pahefana, ny pejy ary ny PageRank
Ny iray amin'ireo antony manan-danja indrindra amin'ny famaritana ny kalitaon'ny rohy tafiditra dia ny fahefana avy amin'ny loharano web izay tonga. Modelin'i PageRank dia mifototra amin'ny fitovian'ny rohy sy ny rohy. Ny ambony kokoa ny fahefana an-tranonkala, ny siramamy mifandray sarobidy kokoa dia azonao amin'ny alàlan'ny backlink.
Mba hahazoana alalana avy amin'ny pejy fandraisana na loharanon-tranonkala, afaka mampiasa ny Semalt Web Analyzer na Tool Moz. Amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo, azonao atao ny mamaritra ny Domain Authority sy Page Authority amin'ny loharano iray. Ho an'ny tarehintsoratra tsirairay dia ho azonao ny isa 1 ka hatramin'ny 100. Ny avo kokoa dia ireo metrika ireo, ny lanjany kokoa ny rohy.
Ankoatra izany, azonao atao ny manamarina ny fahefana amin'ny rohy miditra, mampiasa ny rindrambaiko Majestic SEO. Ity rindrambaiko ity dia hanome anao fomba fijery tahaka ny "Trust Flow" sy ny "Citation Flow. "Amin'ny sehatra iray, ireo mari-pamantarana ireo dia hampiseho anao ny rohy rindrin'ny URL. Ny avo roa heny amin'ireto sehatra ireto dia ny lanjany kokoa ny rohy amin'ity tranonkala ity.
Ny lanjan'ny lahatsoratra na ny loharanon-tranonkala
Google dia lasa mahira-tsaina ao anatin'izao andro izao ary afaka mamaky mora kokoa ny votoatin'ny tranonkala amin'ny rohy mankany anaty dia napetraka ao. Azony hazavaina amin'ny tanjona voalohan'ny Google ny manolotra ny hatsaran-toetra avo lenta, fa indrindra indrindra amin'ny valin'ny fikarohan'ny mpampiasa.
Google dia manombatombana ny maha-zava-dehibe ny loharanon-tranonkala iray amin'ny alàlan'ny rohy anatiny sy ny endri-tsoratry ny rohy. Izany no antony tokony handinihanao manokana ny maha-zava-dehibe ny lahatsoratry ny vatonao. Ampiasao ny mombamomba ny marikao na ny teny fanalahidinao avo lenta raha te hampiditra ny rohy ianao.
Ny fahazoana backlinks avy amin'ny loharanom-baovao izay mifanaraka tsara amin'ny lohahevitra eo amin'ny sehatra misy anao dia hampitombo ny toerana misy ny toerana misy anao ho an'ny teny manokana.